Shaqo & waxbarashoActuellement sélectionné
Shaqo iyo is masruufid
Shirkad gaar ahaaneed
Jaamiciyiinta ajaanibta ah
Jidkii aan usoo maray shaqo helida
Waxaan heystaa waxbarasho iyo xirfado shaqo oo kooban
Waxaan heystaa xirfado shaqo oo hore
Waxaau heestaa shahaado jaamacadeed
Halkani waa xafiiska shaqada
Xirriirada hay'adaha tacliinta sare
Min magangelyo doon ilaa shaqo
Xafiiska shaqada waxuu abaabulaa adeegyo kala duwan oo aad ka qeyb qaadan kartid markaad shaqo raadis tahay, waxeey noqon kartaa siminaarro ku saabsan sida aad u qoreeysid arji shaqo dalbasho iyo talo ku saaabsan waraysiga shaqeed.
Si ad u aragtid shaqooyinka bannaan waxaad ka raadin kartaa halkaan. Haddii aad rabtid inaad ogaatid sida eey jaanisyaha shaqo ee xirfaddaada u egyihiin mustaqbalka waxaad ka raadisaa xafiiska shaqada adeegiisa lagu magacaabo jiheeyaha xirfadaha. Jiheeya xirfadaha waxuu ku fasiran yahay luqadda iswiidhishka ah oo kaliya.
Si aad uga qeyb qaadatid adeegyada kala duwan ee xafiiska shaqada waxaa shardi ah inaad si qof shaqo radis ah uga diiwaan gashan tahay xafiiska shaqada.
Dhib miyaa inaad shaqo heshid ama waxaad u baahan tahay caawimaad dheeraad ah?
Haddii aad shaqo raadis tahay isla markaana uu jiro qof raba inuu ku shaqaaleeysiiyo waxuu xafiiska shaqada mararka qaarkood siinayaa shirkada ku shaqaaleysiineysa kaalmo dhaqaale waqti cayiman.
Sababta uu qofka shaqada ku siiyay u helayo kaalmada dhaqaale weey kaal duwan tahay. Waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay fursad aad ku baratid luqadda iswidhishka adigoo jooga goobta aad ka shaqeysid, in xaaladada shaqo eey u baahan tahay in la habeeyo sababo la xiriira cuuriyaannimo ama sababo kale oo la xiriira inaad caawimaad dheeraad ah u baahan si aad ula jaanqaadid ka shaqeynta Iswiidhan. Ujeedada ka dambeeysa in kaalmo dhaqaale la siiyo shirkadda ku shaqaalleeysiineysa waa in laguu fududeeyaa sidii aad shaqo ku heli laheyd.
Caawimaadaha kala duwan ee xaga shaqaaleysiinta waxaa loogu yeeraa waxyaabo kala duwan. Waxeey noqon karaan instegsjobbama nystartsjobb ​. La xiriir shaqaalaha mas'uulka kaa ah si aad loo fiirsho haddii qaababkaan kaalmo ee shaqaaleysiinta aad dalban kartid.
Waddooyin badan oo shaqo loo maro
Waxaa jira waddooyin badan oo shaqo loo maro, oo aannan aheyn kuwa uu xafiiska shaqada kaa caawiyo. Si toos ah ayaad ula xiriiri kartaa shirkadaha shaqada laga dalbado, dadka aad taqaanid ayaad u sheegi kartaa inaad shaqo raadis tahay, arjigaada shaqo ayaad qeybin kartaa, waxaad kaloo u jawaabi kartaa ogeysiisyada shaqo ee ku qoran bogaga internetka iyo joornaallada.
Warbixin dheeraad ah oo ku saabsan siyaabaha kala duwan ee shaqo raadiska ayaa ka heleysaa halkaan.